Repoblika Dominikana: Hetsika fampahalalana ny homamiadana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2009 19:53 GMT
Volan'ny fisorohana ny homamiadan'ny nono any amin'ny firenena maro ny volana oktobra, fotoana ankalazain'ny vohikala manandaza, fandaharana manokana amin'ny fahitalavitra, famakian-teny, valandresaka ara-medikaly ary ny fizarana boky kely sy trakitra misy izay tsara ho fantatra. Ireny rehetra ireny dia manindry manokana ny amin'ny fizahana ataon'ny tsirairay sy ny mampiahiahy tokony hoheverina.
Tany amin'ny Repoblika Dominikana dia nisy ny ezaka fampahafantarana mikasika ity aretina ity. Nanomboka tamin'ny volana oktobra 2006 dia lasa lehibe mpitondra teny amin'ny fanentanana momba ny homamiadan'ny nono fanao isan-taona avy amin'ny “Office of the First Lady [es]” (Biraon'ny Vadin'ny Filoha) antsoina hoe “Anio no andro mety” ny Dokotera Margarita Cedeno. Ity fanentanana ity dia mitaona ny vehivavy hikarakara ny toe-pahasalamany ka eo ny fanaovana valandresaka sy vakinteny atao manerana ny firenena. Fanampin'izany dia izarana boky kely ny vehivavy ary maimaim-poana ny fitiliana ny nono.
Sarin'ny fanokafana ny fampahafantarana. Nahazoana alalana avy amin'ny Biraon'ny Vadin'ny Filoha.
Nahatratra ny faratampony tamin'ny alalan'ny fampisehoan-damaody nataon'ny mpanao haikanto Rtoa Carolina Herrera ity fanentanana ity, Herrera izay nankasitraka ny finiavan'ny Vadin'ny Filoha ary nanohana fa ny hetsika “Anio no andro mety” no lasa hiakam-pamantarana hanairana ny momba ity aretina ity. Tao amin'ny valan-dresaka nataony ho an'ny mpanao gazety no niantsoan'i Herrera, izay anisan'ny ao anatin'ny fandraisana andraikitra iraisam-pirenena SER, mpanohana ny fanentanana eo amin'ny sehatra manerantany, ny rehetra hanambatra ho iray ny fanentanana isan-karazany atao manerana ny tany.
Misy koa ny fampahafantarana hafa natao hampahafantarana ny karazana homamiadana rehetra, anankiray amin'ireny ny “Caminantes por La Vida” (Diabe ho an'ny Fiainana) izay diabe hatao manerana ny làlana rehetra ao Saint Domingue renivohitra, ary andiany fahaefatra no hatao ankehitriny. Finiavana natomboky MercaSID izy ity, MercaSID mikarakara momba ny sakafo sy izay mahasoa ny fianakaviana, izay manangom-bola hanampiana ireo mpilatsaka an-tsitrapo sy ireo toeram-pitsaboana ary ireo fikambanana miady amin'ny homamiadana. Tamin'ity taona ity dia nantsoina hoe “Esta Va por Todos” (Ho an'ny rehetra izy ity) ny hetsika.
Sarimihetsika mialoha ny diabe tamin'ny 2008 nalefan'i Jorge Valdez.
Zava-dehibe ny fampahafantarana tahaka izao ho an'ny Dominikana miaina miaraka amin'ny homamiadana. Ilay mpitoraka bilaogy Principe Mestizo nanana olona akaiky azy tratry ny homamiadana no nilaza fa tena ilaina ny fampahafantarana:
Ny dadatoako, Juan, mpahay lalàna nisongadina, 32 taona, no voan'ny homamiadan'ny vavony, izay niparitaka tamin'ny taovany hafa ary ny niafarany dia nandaozany ny tany, navelany ho irery teto aho niaraka tamin'ny lesona maro, mijery sy mankasitraka ny fianakaviako satria hatramin'izay dia niray hina tsara izahay rehetra nanampy ireo zanany mbola kely, izay nanjary tahaka ny zanaka lahy ho an'ny raiko aza.Taona maro taty aoriana dia anankiray amin'ireo rahalahan-draiko (dadatoa Chihchi) no voalaza fa voan'ny homamiadana koa ka nampahatsiahy indray ny fotoana niainana taloha. Nahita endrika hafa momba ity aretina ity aho.
Ny tena zavatra tsapa sy mazava dia hoe rehefa misy olona iray voan'ny homamiadana ao amin'ny fianakaviana dia ohatry ny hoe voa tsy fidiny izany daholo ny rehetra.